Maxaa lagu xasuusan dooonaa Gudoomiyihii Gobalka Banaadir Eng Yariisow? – Bandhiga
Maxaa lagu xasuusan dooonaa Gudoomiyihii Gobalka Banaadir Eng Yariisow?
Allaha u raxmadee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray, wuxuu ahaa shaqsi dalkiisa daacad u ah una soo dhabar adeegay.
Eng.Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yarisow dowladda hadda jirta waxey markii hore u magacowday Wasiirka Warfaafinta & Hanuuninta Dadweynaha iyadoo markii dambe loo magacaabay Gudoomiyaha gobaka Banaadir iyo Duqa Muqdisho waa aqoonyahan heysta shahaadaha Masterka, mudadii 9sano ahayd ee ugu dambeysay waxa uu ka shaqeynayay dalka, xilal kala duwan ayuu dalka kasoo qabtay.
Wasiirka maaliyadda, wasiirka warfaafinta, la taliye sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyo Afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya intaas ayuu u noqday dowladihii kala ahaa Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Injineer Yariisow waxa uu ka mid ahaa qorbajoogga Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa dalka UK, waxa uu xubin firfircoon ka soo noqday jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku dhaqan, isagoo muddo 10sano ahna dowladda hoose ee magaalada London uu kasoo shaqeeyay heer agaasinna uu ka gaaray, ugu dambeyn wuxuu geeriyooday isagoo ah Gudoomiyaha iyo Duqa magaalada Muqisho.
Maxaa lagu xasuusan doonaa Eng Yariisow:
Gudoomiyaha ayaa intii uu xilka hayay wuxuu hergeliyay xarumo dan guud ah oo Bulshada Soomaaliyeed loogu adeego, sidoo kale Eng Yariisow ayaa dib u dhis ku sameeyay qaar kamid ah wadoooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho,sidoo kale wuxuu dayactir ku sameeyay qaar kamid ah xarumaha gobalak Banaadir.
Gudoomiyaha ayaa intii uu xafiiska joogay wuxuu xoogga saaray sareynta sharciga iyo adeega garsoorka, wuxuuna dib ugu celiyay guryahooda muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga heestay muddo sanado ah.
Eng Yariisow waxyaabaha lagu amaanayo ayey kow katahay in dad danyar ah uu u soo celiyay guryo xoog loogu heestay.
Waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa shaqaaleysiinta dhalinyarada ku dhaqan gobalka Banaadir oo qaar badan uu shaqaaleysiiyay, iyadoo ay xusid mudantahay in sanad walba dhalinyaro cusub ay ku biireysay gobalka.
Allaha u naxariistee wuxuu ahaa shaqsi daacad u ah maamul walba oo dalka soo mara si hufana ula shaqeeya una hogaansama awaamiirta madaxda.
Halbeega gudoomiayaha ayaa ahaa nabadda oo laga shaqeeyo, is cafiska oo la dhiirigeliyo, iyo dalka oo daacad loo ahaado.